Gudiga Xalinta Khilaafaadka oo go'aan ka gaaray saddax kursi oo hakad la geliyey - Caasimada Online
Home Warar Gudiga Xalinta Khilaafaadka oo go’aan ka gaaray saddax kursi oo hakad la...
Gudiga Xalinta Khilaafaadka oo go’aan ka gaaray saddax kursi oo hakad la geliyey
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashooyinka Dadban ee Heer Federaal (GXKHDDF) ayaa go’aan ka gaaray Kuwaasta Summaddoodu tahay HOP#201, HOP#209 & HOP211 oo deegaan doorashadoodu tahay Gobollada Waqooyi-Somaliland.
Guddiga oo guddoomay Cabashooyin kasoo laabtay kuraastaas ayaa baaris ku sameeyay waxyaabaha ay ku doodeen dhinacyada tabashooyinka ka gudbiyay, waxaana ugu dambeyn uu kasoo saaray go’aan.
Guddiga Xallinta Khilaafaadka Doorashada Dadban ee Soomaaliya ayaa shaaciyay in Saddexdan kursi doorashadooda loo maray hab waafaqsan heshiiskii doorashada, isla markaana ansax yihiin.
Kuraastaan ay shaaciyeen guddiga xalinta khilaafaadka iney yihiin kuwa saxan habkii ay doorashadooda u dhacday ayaa ahaa kuraas todobaadkii lasoo doorashadooda ka dhacday magaalada Muqdisho, kuwaas oo ka mid ahaa kuraasta Golaha Shacabka ee deegaan doorashadooda tahay gobolada Waqooyi ee Soomaaliland.
Waa kuraastii ugu horeysay oo dacwad laga soo gudbiyey tan iyo markii uu Ra’isulwasaare Rooble eryey 7 kamid ah guddiga xallinta khilaafaadka oo lagu eedeeyey inay ku milmeyn siyaasadda.
Hoos Ka akhriso Qoraalka Guddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashada Dalka.